Kenya oo safiirkeeda Soomaaliya u yeeratay, kan soomaalidana ka soo “eriday” dalkeeda | RUUG-CADDAA
Kenya oo safiirkeeda Soomaaliya u yeeratay, kan soomaalidana ka soo “eriday” dalkeeda
Posted by Iftiinshe on February 17th, 2019
Dowlada Kenya ayaa sheegtey in ay u yeertey safiirkeeda Soomaaliya inuu dalka dib ugu soo laabto, iyadoo safiirka Soomaaliya ee Kenyana fartey inuu dalka isaga boxo.
Kenya ayaa sheegtey in ay ka careysan tahay xumaado sida ay dowlada Soomaaliya u beecgeysey shidaalka dhulbadeedka Kenya ee dhaca xuduuda Soomaaliya
Talabadaas ayey Kenya ku tilmaantey mid aan loo sineyn, ceeb iyo sharci darana ah in la maroorsado qeyraadka Kenya, waxaana ay sheegtey Kenya in talabadaas aysan jawaab la,aan ahaaneyn isla markaana ay bixin doonto jawaab u dhiganta talaabada loogu gefey dadka reer Kenya iyo qeyraadkooda.
Qoraalkan oo ka koobnaa 15 qodob ayaa waxaa kaloo ay ku sheegtey dowlada Kenya in ay arrintan 6dii bishan kala hadashey Safiirka Soomaaliya u jooga Kenya iyadoo ku wargelisey in shirka London lagu soo gudbinayo dhul badeed ay Kenya leedahay iyagoo ka dalbadey in dhulkaas laga saaro meelaha la soo bandhigaayo shidaalkooda.
Safiirka Soomaaliya ayey sheegeen inuu u xaqiijiyey inuu heley fariintooda isla markaana jawaab deg deg ah oo walaaltinimo ay ka fishaan, sidoo kale Kenya waxa ay sheegtey in ay safiirkeeda Soomaaliya isna uu u gudbiyey cabashadooda dowlada federaalka balse aan waxba laga qaban.
« Fasiraad ku aadan waxa salka ay ku heyso xiisadda diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya
WAR-SAXAAFADEED ka soo baxay dawlada federaalka soomaaliya »